आफ्नै घरभित्रै शंकास्पद मृत भेटिइन् सरिता : शरीरभरी निलडाम, श्रीमान फरार ! आफन्त प्रहरी नियन्त्रणमा – Nepal Trending
On १४ बैशाख २०७६, शनिबार १३:२३
काभ्रेपलाञ्चोक । निक्कै मेहनती छिमेकी बिहान ९ बजेसम्म नउठ्दा काभ्रेको सिपाघाटका स्थानीय अचम्ममा परे । शुक्रवार बिहान ९ बजेसम्म लैनो गाई दुहुनु पर्नेमा नदोहेपछि गाई कराउन थाले । त्यसपछि स्थानीयहरु मण्डनदेउपुर–६ सिपाघाटकी २५ बर्षिया सरिता दुलालको ढोका ढकढक्याउन थाले । मरिसकेको मान्छे कहाँ बोल्थ्यो र ? उनीहरुलाई शंका लाग्यो र प्रहरीचौकीसम्म खबर पठाए ।
प्रहरी सरिताको घरमा पुग्यो, शरिरभरी निलडाम थियो उत्तानो परेको अवस्थामा शव लडिरहेको थियो । तर सामान्य मृत्यु भनेर पत्याउनै मुस्किल पर्ने अवस्थाको थियो । त्यसपछि प्रहरीले श्रीमान्को खोजी गर्दा सुदिप दुलाल फरार भैसकेका थिए ।
बिहान १० बजे प्रहरी पुगेपछि उसले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलमा जाहेरी ग¥र्याे । गम्भिर प्रकृतीको घटना बुझेसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेवाट डिएसपी दिपक गिरीको नेतृत्वमा टोली गएर सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्याे ।
स्थानीय र मृतकका आफन्तहरुले उनको हत्या भएको किटानी गरिसकेका थिए । श्रीमान फरार रहेपछि प्रहरीले परिवारलाइनै शंकाको घेरमा राख्यो । समय समयमा जेठानीसँग मृतकको घटनपटन हुने छिमेकीले बताएपछि प्रहरीले मृतकका सासु ससुरा र जेठानी जेठाजुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
। मृतकका आफन्तले हत्या भएको भन्दै किटानी जाहेरीको अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् । शव पोष्टमार्टमको लागि अस्पताल लगिएको छ भने काभ्रेका डिएसपी दिपकी गिरीले हत्याको आशंका भएको उल्लेख गरेका छन् । श्रीमान्को नाम सुदिप दुलाल बिहानदेखि फरार रहेका छन् । उनले समय समयमा गाँजा सेवन गर्ने गर्दै गरेका थिए ।
प्रहरीले मृतकको ससुरा पिताम्बर दुलाल सासु गंगा दुलाल जोठाजु केशव दुलाल र जेठानु संगिता दुलाललाई नियन्त्रणमा लिएको छ । उनी स्थानीय महादेव प्रावीको शिक्षिका समेत हुन् । यो खबर राजधानी दैनिकमा छ ।